केटा साथीसँग एउटै कोठामा रात विताएकी छु — Nepal Sarokar
हिजोमात्रै एउटी साथीसंग भेटमा गफिने क्रममा…
साथी “उनको के छ त खबर ? “
म अल्लमल्ल परें, “ को उनी ?“
“अस्ति वानेश्वरमा देखेकी थिएँ मैले, बाइकमा जाँदै थियौ त तिमी, ब्वायफ्रेन्डसंग !“
म झनै अल्लमल्ल,“कतिबेला ?“
“बिहान बिहानै डेटिङ्ग जाँदा रहेछौ त तिमीहरु, बिहान आठ बजेतिर देखेकी मैले ।“
“उनी मेरो स्कुल देखिका साथी हुन्, मेरो कामले गर्दा हामी बानेश्वर आएका थियौं, उनी मेरो राम्रो साथी हुन्, त्यसैले मलाई सहयोग गर्नको लागि आएका हुन् ।“
फेरी उनी,“नढाँट न !“
यति स्पष्टिकरण कम ठहरिएपछि, प्रमाण त के थियो र दिउँ, त्यसैले चुप लागें । उनलाई मेरो त्यो मौनता स्वीकारोक्ति लाग्यो होला । अब फेरिको भेटमा पनि सोध्नेहोलिन् ,“के छ उनको खबर ?“
वाह ! सम्बन्धको परिभाषा र मूल्यांकन । के बाइकमा संगै बसेका, पार्कमा संगै बसेका , रेस्टुराँमा संगै खाजा खाइरहेका, केटा र केटी ब्वायफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड नै हुन्छन् ? ती मिल्ने साथी हुन सक्दैनन् ? सहकर्मी हुन सक्दैनन् ? ती मध्ये कोही, दाजु–बहिनी, दिदी–भाइ पनि त हुन सक्लान् ! किन यति साँघुरो हाम्रो सोंचाई ?
कामको लागि काठमान्डौ बाहिर जाँदा, हामी महिला पुरुष दुवै मिलेर जान्छौं । कहिलेकाहीं गाउँमा एउटा कोठा मात्र उपलब्ध हुन्छ त कहिले महँगो होटलमा बस्नुपर्दा, एउटा कोठा लिएर सबैले संगै रात बिताउनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ रहंदा हामीहरु, एउटा टिम, साथी–साथी, दाजु–बहिनी, दिदी–बहिनी, अझ भनौं, एउटा परिवार बनेर बसेका हुन्छौं । मैले आजसम्मको “फिल्डको“ कामको अनुभवमा कुनै पनि पुरुष सहकर्मीले दुव्र्यवहार गरेको आभाषसम्म पाइनँ । हामी निश्चित उद्देश्यले, निश्चित अनुशासनमा रहेर काम गरिरहेका हुन्छौं । तर सुन्नेहरुको लागि यो ठूलै ’काण्ड’ लाग्नसक्छ । यसै आधारमा मलाई चरित्रहीन केटी भएको पनि शंका आउला !
कहिलेकाहीं गाउँमा एउटा कोठा मात्र उपलब्ध हुन्छ त कहिले महँगो होटलमा बस्नुपर्दा, एउटा कोठा लिएर सबैले संगै रात बिताउनुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ रहंदा हामीहरु, एउटा टिम, साथी–साथी, दाजु–बहिनी, दिदी–बहिनी, अझ भनौं, एउटा परिवार बनेर बसेका हुन्छौं ।
त्यसैले कति केटी साथीहरुले यो कुरालाई लुकाउन चाहन्छन् । नलुकाउन् पनि त कसरी ? मोबाइलमा केटाको फोन नम्बर राख्न नहुने, कतै केटासंग हिंडिरहेको भेटिइन् भने पनि स्पष्टिकरण दिनुपर्ने नियममा जो बसेका हुन्छन् । काम गर्ने क्रममा गाउँलेलाई स्पष्टिकरण दिनुपर्ने हुन्छ सम्बन्धको र यता परिवारलाई आफ्नो बसाईको । यसैले गर्दा कति साथीहरुले त मानसिक तनाव अनुभव गर्छन् । यो तनाव अधिकतम मात्रामा केटीहरुलाई आउँछ ।
हाम्रो समाजमा एउटा सोंच छ कि, केटा र केटी भनेको कि दाजु–बहिनी, दिदी–भाइ वा अरु पारिवारिक सम्बन्ध भएका । यति नभए पक्कै ब्वायफ्रेन्ड वा गर्लफ्रेन्ड हुन् । त्यसैले त सम्बन्धमा भएकाहरु पनि अरुसंग सम्बन्ध लुकाउनको लागि, हामी दाजु–बहिनी हौँ भन्छन् । साथीको सम्बन्ध भएका पनि स्पष्टिकरण दिन्छन, “त्यस्तो होइन , हामी दाजु बहिनी जस्तै हौँ “।
के केटा र केटीबीचमा साथी–साथीको सम्बन्ध हुने सक्दैन ? के केटा र केटीबीचमा यौनाकर्षणको लागि मात्र सम्बन्ध गाँस्ने हो ? कक्षामा केटा र केटीसंगै बस्न नहुने, शिक्षकले सजाय दिनुपर्यो भने, केटीलाई केटासंग र केटालाई केटीसंग बसाल्ने वातावरणमा शिक्षित बनेका हामी, सायद त्यो सोंचाईबाट बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनौ ।
के केटा र केटीबीचमा यौनाकर्षणको लागि मात्र सम्बन्ध गाँस्ने हो ? कक्षामा केटा र केटीसंगै बस्न नहुने, शिक्षकले सजाय दिनुपर्यो भने, केटीलाई केटासंग र केटालाई केटीसंग बसाल्ने वातावरणमा शिक्षित बनेका हामी, सायद त्यो सोंचाईबाट बाहिर निस्कन सकिरहेका छैनौ ।
समाजको त्यो सोंचबाट माथि उठ्न नसकेर होला, केही पुरुषहरुले कोही केटीले आफूसंग हाँसेर, बिना संकोच बोलेको, आफ्नो कुराहरुलाई स्वीकारेको पाए भने, केटी आफूतर्फ आकर्षित भएको मान्छन् क्यारे । अनि उही केटा र केटी बीचको यौनिक सम्बन्धलाई कोट्याउन थाल्छन् ।
कतिपय अवस्थामा केटीहरु पनि साथीको सम्बन्धलाई स्वीकार गर्न सक्दैनन् । सम्बन्धलाई एउटा निश्चित नामले चिनाउन चाहन्छन् । त्यस्तै कतिले संस्कार र अनुशासनको नाममा आफूलाई एउटा घेराबन्दीमा राखिरहेका हुन्छन् ।
समयको रफ्तारसंगै सोंचमा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । लैंगिक संरचनालाई समानतामा बदल्न सम्बन्धको बुझाई पनि फराकिलो बनाउँ । अनि पो हिंड्न सकिएला समृद्धिको लागि काँधमा काँध मिलाएर ।